“Waxaan xirnay ilaa 100 maxaabiis dagaal ah oo ku xirnaa Balad Xaawo” ayuu yiri wasiir Dubbe. - Axadle
“Waxaan xirnay ilaa 100 maxaabiis dagaal ah oo ku xirnaa Balad Xaawo” ayuu yiri wasiir Dubbe. – Axadle
Wasiirka warfaafinta XFS Cismaan Abiikar Dubbe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa faah faahiyay qasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Dubbe wuxuu sheegay in duulaanka ay qaadeen xoogag uu hogaaminayo Wasiirka Amniga Jubbaland C / rashiid Janan laakiin wuxuu ku sifeeyay mid Jihaad ah iyo ciidamada Kenya oo iskaashanaya si ay ugu guuleystaan ​​gacan ku haynta Balad Xaawo.
“Ciidamada qaranka waxay iska caabiyeen duulaan saqdii dhexe ee ciidamada Kenya iyo maleeshiyo ay diyaariyeen inay ku qabsadaan Balad Xaawo, taasoo dhabar jab ku ah qaranimada iyo madax banaanida Soomaaliya. Ugu dambeyntiina jabhadihii iyo ciidamadooda shisheeye waa laga adkaaday.” Wasiir Dubbe.
Wasiirka warfaafinta XFS ayaa sheegay in ilaa 100 maxaabiis ah lagu qabtay dagaalka, wuxuuse wax laga xumaado ku tilmaamay in wiilasha Soomaaliyeed dalkooda loogu adeegsado dano gaar ah.
“Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ayaa jebiyey cadowga, waxaana gacanta lagu dhigay ku dhowaad 100 maxaabiis dagaal ah, waxaan ka xunahay in dalkooda loogu adeegsado, sawiro ma qaadaneyno sababo bani’aadanimo awgood. Ayuu yidhi Wasiir Dubbe.
Wasiir Cismaan Abuukar Dubbe ayaa DFS ku eedeeyay inay madaafiic iyo hoobiyeyaal ku garaacday magaalada, kuwaasoo waxyeelo u geystay guryo iyo goobo ganacsi oo ay deganaayeen dad rayid ah.
“Markii cadowgu fulin waayey rabitaankooda, waxay bartilmaameedsadeen goobo ganacsi iyo dad shacab ah madaafiic iyo hoobiyayaal oo lala beegsaday dhismaha rayidka waadna ogtihiin in hal qoys ay ku dhinteen shan qof. Waxay ku koreen dhisme ay leedahay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waana qeyb ka mid ah. Qorshaha Kenya ee ah inay bartilmaameedsato shirkadaha In la dumiyo hogaamiye ma ahayn mid ay ka dambeeyeen wiilasheenu laakiin waxay ahayd qorshe cadawgu soo qaaday Sidaasi waxaa yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe, oo warbaahintu wax ka weydiisay sheegashada Hogaamiye ku xigeenka Jubbaland ee ah in ciidamada maamulka ay weerareen Dowladda Federaalka, ayaa ku jawaabay in dagaal saqdii dhexe lala galay madaafiicda uusan aheyn mid khuseeya Jubbaland balse uu yahay mid shisheeye.
Cismaan Abuukar Dubbe, wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay inay ka hortageen hub culus oo si sharci darro ah looga tahriibinayay xadka, markii la weydiiyayna sababta ay u soo bandhigi waayeen uu sheegay in baaritaanka uu socdo ayna dhowaan soo bandhigi doonaan.